Best Nero Alternative maka Windows 7 / Vista / XP
1. Software dị ka Nero
2. Nero maka Mac
3. Black Alternatives
> Resource> DVD> Best Nero Alternative maka Windows 8/7 / Vista / XP
Best Nero Alternative maka Windows 8/7 / Vista / XP
Nero bụ ụlọ ọrụ na-eduga DVD-ere ọkụ software na ahịa. Ị nwere ike iji ya ime ihe ọ bụla yiri ka DVD e kere eke na-enwu. Ma dị ka ndị ụlọ ọrụ na-eduga image edezi software Photoshop, e nwere ihe a nkpoda mmụta usoro iji software. Ya mere ajụjụ mgbe ahụ bụ: bụ n'ebe a yiri usoro dị ka Nero ma nke ahụ bụ mfe iji na Windows 8/7 / Vista / XP / 2000?
Ebe a bụ ihe anyị na nkwanye: Wondershare DVD Creator maka Windows bụ ezigbo Nero ọzọ maka Windows. Ọ na-akwado na-ere ọkụ niile ewu video formats ka DVD ọsọ ọsọ na mfe. Ọ gụnyekwara nza nke mara mma DVD menu ndebiri otú i nwere ike chepụta a ahaziri DVD menu na ala. Ugbu a download Nero Ẹkot maka Windows isure ọ bụla video ka DVD ma na-ekiri na n'ụlọ gị gị na DVD ọkpụkpọ.
Ntak emi Họrọ Wondershare DVD Creator maka Windows
Bụ eziokwu bụ na e nwere nza nke nhọrọ maka DVD-ere ọkụ software, Ntak-ahọrọ Wondershare DVD Creator dị ka ọzọ ka Nero? N'okpuru ebe a bụ ihe mere. Lee kwa zuru ezu ndu-eji nke a Nero ọzọ maka Windows - n'ezie ngwa ngwa na mfe. Ebe ọ bụ na Nero adịghị tọhapụrụ a Mac version, ị nwere ike nweta DVD Creator for Mac ka Nero ọzọ na Mac, kwa.
Sara mbara format nkwado, ọ dịghị akakabarede
Wondershare DVD Creator Maka Windows-akwado ndị niile mgbe video formats, ma na HD ma ọ bụ SD formats, gụnyere MOV, MP4, M4V, AVI, FLV, WMV, 3GP, ASF, MKV, MOD, AVCHD, RMVB, wdg Ya mere, ị na-adịghị mkpa ihe mmezi video Ntụgharị iji tọghata video ka adabara format tupu ọkụ DVD.
Nero ọzọ maka Windows nwere onye ọrụ-enyi na enyi interface
Mee DVD ngosi mmịfe nkiri na clicks
DVD Creator A abụghị nnọọ DVD-ere ọkụ software. Ọ na-enyere gị aka ngwa ngwa ka ngosi mmịfe na fim ndị photos, music na captions. Ọ bụ nile-na-otu ngwọta ndabere video ka DVD na ịkọrọ gị echeta na TV.
Handy video edezi ngwaọrụ
Gị niile videos ga-ele anya kacha mma na DVD. Wondershare DVD Creator Maka Windows-agụnye ihe nile nkịtị video na foto edezi ngwaọrụ-enyere gị welie foto na vidiyo mfe. Ka ihe atụ, i nwere ike ewepụtụ, akuku, bugharia, tinye watermarks, kpatụ video mmetụta, wdg Ka akọ akụkọ na TV, i nwere ike tinye ahaziri captions, ndabere music,-eji ire ụtọ ikwu n'ụzọ na ọkụ na-DVD na a ezi na-achọ DVD menu.
Real-oge preview na ngwa ngwa ọkụ
Nke a Nero ọzọ maka Windows-enyere gị aka a lee anya na gị DVD fim tupu ọkụ DVD. Ọ na-akwado niile diski ụdị dakọtara na gị DVD burner, dị ka DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW. A ngwa ngwa na anụ DVD ọkụ engine na-eji. Ya mere, ị ga-enweta gị DVD n'oge na-adịghị na na na na TV na n'ụlọ gị gị na DVD ọkpụkpọ. I nwekwara ike ịzọpụta DVD nchekwa ma ọ bụ DVD ISO oyiyi faịlụ na kọmputa maka nkwado ndabere na mpaghara nzube ma ọ bụ n'ihi na-ere ọkụ nyekwuo oge ọzọ.
Free download Nero ọzọ maka Windows (free ikpe):
Easy DVD burner maka Beginners
Olee otú Ọkụ JVC Everio vidiyo na DVD
Olee otú iji tọghata RM ka DVD
ImgBurn Alternative maka Windows-atụ aro
Olee otú iji tọghata DAT ka DVD